नागरिक विचार अपील व्यवस्था द्वारा स्थापित सर्तहरू मा राज्य एजेन्सीहरू बाध्य छन्
नागरिक - यो प्रदान गर्दछ रूस बस्ने कुनै पनि व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक अधिकारीहरु गरिएका बयान र अनुरोध। को मुद्दा चलाउने व्यक्ति कार्यालय, प्रहरी, कर अधिकारी, अन्य सरकारी एजेन्सीहरू, साथै: उहाँले विभिन्न अधिकारीहरु लागू गर्ने अधिकार छ स्थानीय सरकारहरूले।
किन अधिकारीहरु ध्यान नतिरी बाँकी? हाम्रो देश को नागरिक, यो मुद्दा अक्सर baffling छ।
रूसी व्यवस्था अनुसार, नागरिक को उजुरी गर्न उपेक्षा गर्न सकिँदैन। अधिकारीहरु 30 दिन भित्रमा पुनरावेदन विचार र आवेदक जवाफ दिन बाध्य छन्। नागरिक दुवै लिखित र मौखिक उजुरी लिन - (र अधिकारीहरूले अक्सर नागरिक अर्थहीन जवाफहरू पठाउँछ पाप दुर्भाग्यवश, कानून जवाफ के हुनुपर्छ निर्दिष्ट गर्दैन।)। तर तपाईं त राम्रो लेखन, उपचार उहाँले एक नम्बर खटाइयो जहाँ आगमन दस्तावेज, को पत्रिका मा लिपिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई खोजी, अधिकारीहरु आफ्नो समस्याको वास्तविक समाधान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने। हैंडलिंग दुई प्रतिलिपिहरू मा लेख्न मनमोहक छ, एउटा अंगहरु, अन्य रहिरहन्छ - कम्पनी द्वारा stamped मिति र आगमन संख्या, संग - तपाईं। त्यसैले अधिकारीहरु तिनीहरूले केहि पाएको छैन भन्दै, जवाफ उम्कन सक्दैन।
नागरिक उपचार प्रस्ताव, आवेदन र उजुरी मा विभाजित छन्। को प्रस्ताव - व्यक्तिगत को एक पहल सुधार, अपग्रेड गर्नुहोस् वा शरीर को गतिविधि सुधार गर्न राज्य अख्तियारको वा स्थानीय सरकार। विवरण - को नागरिक वा अन्य नागरिक सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधान गर्न मदत गर्नुहोस्। उजुरी - आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता को सुरक्षा को लागि अनुरोध।
प्रभावकारी प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न अपील कसरी लेख्न? र पुनरावेदन गर्ने सम्बोधन गरिएको छ जसलाई छ (नाम, मध्य नाम, निवास स्थान, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर) बाट: सबै को पहिलो, तपाईंले स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्छ। को लिखित कागजात विशिष्ट तथ्य समावेश गर्नुपर्छ। सबै खराब छ भन्ने सामान्य विचार, कुनै राम्रो। यो अरू कसैको कल्पना retell गर्न असम्भव छ। उपचार को अन्त मा यो संकेत प्रतिक्रिया गर्दैन भने, मामला मा आफ्नो कार्यहरू बारे अधिकारीहरु चेतावनी गर्न अर्थमा बनाउँछ। यो सेवामा आउँछ भने, संघीय सेवा, उदाहरणका लागि मुद्दा चलाउने व्यक्ति कार्यालय गर्न, पुनरावेदन वा हुन सक्छ। समस्या गम्भीर छ भने - यो अभियोजक जनरल गर्न र रूसी संघ राष्ट्रपति गर्न, प्रेस गर्न, कानुनी कारबाही खतरामा। सामान्यतया यो अधिकारीहरु spurs, र तिनीहरूले कार्य गर्न थालेका छन्।
नागरिक को आवेदन को विचार - अधिकारीहरु को एक प्रत्यक्ष कर्तव्य। अधिकारीहरु धेरै टाढा गएका छन् नभएसम्म तिनीहरूलाई हल उपेक्षा गर्नुहोस्। क्षेत्र को राजधानी गर्न नजिक छ, कम त्यहाँ नागरिक 'अनुरोध गर्न अधिकारीहरु को एक indifferent मनोवृत्ति सामना छ। र सबैतिर जिम्मेवार को अधिकारीहरु नागरिकहरु को कानूनी साक्षरता मा निर्भर गर्दछ। मान्छे बलियो तर्क परिणामस्वरूप, आफ्नो अधिकार थाहा छ भने, एक एकल आधिकारिक, यदि उसले आफ्नो दायाँ मनमा किनभने यो आफ्नो क्यारियर नकारात्मक असर गर्न सक्छ, यस्तो उपचार बेवास्ता उद्यम थियो छ।
ई-सेवाहरु: "तपाईंको INN जान्नुहोस्"
पैटी चोरी। प्रशासनिक offenses को रूसी संघ कोड
गैर-अनुपालन स्थितिको मुद्दा। एउटा पोस्ट असफल लागि निष्कासन
बैंक मा सघन दूध कसरी खाना पकाउनु? एउटा सरल तरिका
आधुनिक संसारमा कसरी चुरोट चिन्न सकिन्छ?
किन फ्रिज मा तातो सक्दैनन्? यो पकवान SPOILED छ त्यो सत्य हो?
सरल, तर मूल फूल - लेख नालीदार गत्ता बनेको
हटाउन सकिने ह्यान्डल संग कराइ "TEFAL": दायरा, सुविधा र समीक्षा
काम विवरण प्रबन्धक कार्यालय र उद्यम अन्य कर्मचारीहरु
Zentangl र dudling: ढाँचाहरू